Rasaasa News – Xiddig, Xaaji & Xamxamta Shirqolka: Qalinkii Abwan Maxamed C/Qadir Stanza
Xiddig, Xaaji & Xamxamta Shirqolka: Qalinkii Abwan Maxamed C/Qadir Stanza
on February 10, 2014 11:34 pm
Xogta Shacabka (Opinion) Sida ay baahisay warbaahinta gudaha iyo dibadda, waxaa 26/01/2014 xarunta dalka Kenya, Nairobi, laga afduubay labo masuul oo ka tirsanaa Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeeniya kuwaasoo kala ahaa: Sulub Cabdi Axmed iyo Cali Axmed Xuseen oo sida la ii sheegay ka mid ahaa saraakiisha sare ee JWXO ee muddada dheer furinta ku jiray. Waxaa sidoo kale saraakiishan lala afduubay Ugaas Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Dhaqane oo ah siyaasi rugcaddaa ah oo ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka xilal
wasiirnimo iyo kuwa xildhibaannimana ka soo qabtay xukumadihi Soomaaliya ee ay kala hoggaaminayeen: Dr. Cabdiqaasin Salaad Xasan iyo marxuum Korneel Cabdullaahi Yuusuf Axmed-yeey. Ugaas Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud wuxuu mar ka mid ahaa Baarlamaanki Xorta ahaa ee Soomaaliyeed iyo Dib-u-xoreynti fadhiyey xarunta dalka Eritrea ee Asmara kuwaasoo ka gadooday gulufki ay Ciidamada Qalabka Sida ee Itoobiya ku ballaariyeen dalka Soomaaliya ka dib marki ay kooxaha magayalka adag ee xagjirka ah oo huwanti Maxaakiimti Islaamiga ahaa ku dhafnaa ku gooddiyeen in ay Addis Ababa ciidda ku tukanayaan, hanjabaaddaasoo halis amni ku aheyd ammaanka qaranka Itoobiya sababtayna la-wareeggoodi Xamar ee ay ciidamada Itoobiya Soomaaliya xarunteeda ku qabsadeen.
Ilaa iyo inti uu qafaalkan dhacay, waxaa soo baxaya warar kala duwan kuwaasoo dhanka warbaahinta Jabhadda ku jaadan ay sheegayaan in Ugaas Cabdiqaadir Xaaji uu shirqool u dhigay saraakiisha JWXO uuna gacan sirdoon siiyey ciidamada ammaanka Itoobiya oo kubadda loo sallaxay goolka ku laaday waa sida ay aaminsan yihiin taageerayaasha iyo warfidiyeenka JWXO u janjeera amaba ka midka ahe.
Waxaa kaloo jira warar kuwan hareer-socda oo sheegaya in labada sarkaal ee Itoobiya u gacangalay ay isdhiibeen ayna ayaga Cabdiqaadir shirqooleen, sidan waxaa aaminsan taageerayaasha Ugaas Cabdiqaadir Xaaji oo arrinta ku micneeyey in Itoobiya ay muddo dabin la gaadeysay Cabdiqaadir Xaaji oo muddo rubuc-qarni ah Itoobiya col la ahaa, marna ahaa afhayeenki rasmiga ahaa ee ururki burburay ee Al-Itaxaad Al-Islaami oo dowladda Itoobiya la galay dagaallo lagu hoobtay inkastoo akhiiranki laga taagroonaaday xoogna lagu maquuniyey ururkaas.
Waxaa kaloo jira warar sheegaya in saraakiisha ONLF iyo siyaasigan Soomaaliyeed ay noqdeen shimbirti tuuryada la kulantay sirdoonka Itoobiyana uu hal dhagax labo shimbirood ku wada dilay fursadda u dagantayna sidi ugu habbooneyd uga faa’iideystay maadaama uu Ugaas Cabdiqaadirna Itoobiya col siyaasadeed la ahaa saraakiisha gobannimo-doonkana ay dagaallada gudaha Ogaadeeniya ka socda lafdhabar u ahaayeen Itoobiyana ku ahaayeen lafdhuungashay.
Warar kale ayaa tibaaxaya in saraakiisha jabhadda iyo Ugaas Cabdiqaadirba ay heshiis ku ahaayeen in ay Itoobiya nabad-shaqsiyadeed la qaataan arrinta afduubkana ay aheyd dhoollatus siyaasadeed taasoo si maldahan dadweynaha indhaha magaad loogu marinayey sidaas darteedna ayna qolana qolada kale dabin u dhigin. Dadka arrintan aaminsan waxey ku doodayaan in Ugaas Cabdiqaadir Xaaji uu mucaaradnimada Itoobiya darteed xil uga waayay Soomaaliya sababtuna waxaa weeye ayey leeyihiin in Itoobiya ay awood buuxda u leedahay in siyaasi kastoo ka soo horjeeda siyaasaddeeda Soomaaliya ku wajahan uusan Soomaaliya xil ka qaban karin. Dhanka saraakiisha jabhaddana waxaa lagu micneynayaa in abbaanduulayaashan ay xilli dheer gudaha Ogaadeeniya ka dagaallamayeen furumo ay dayaalyahannada jabhadda iyo kuwa dowladda Itoobiya isku haleeleenna guul iyo guuldarraba u soo joogeen ayna ku daaleen dagaalka jiitamay ee ay JWXO Itoobiya kula jirta oy dadkan u arkaan midaan natiijo wanaagsan wali laga gaarin marka loo eega 1984 oo aheyd sanadki jabhadda la aasaasay ilaa iyo maanta oo 30 sano laga joogana ay jabhadda ka badan la’dahay ku dhufoo ka dhaqaaq saas ahaanna waxey leeyihiin saraakiishan ayaa go’aansaday in ay isdhiibaan loona qaata in la afduubay si ay dagaalyahannada gudaha Ogaadeeniya ku jira u niyadjabin ee dagaalka u sii wadaan.
Marka ayna halbeegga ‘Political Homo Sapiens’ diiradda la duljoogsanna, dhammaan toodahan waa kuwa maangal ah faaqidaaddoodana waxaa ka soo bixi kara malyuun fikradood oo duggaashanaya fogaan-aragga siyaasadda iyo khiyaanooyinkeeda.
Waxaase xusid mudan in Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeeniya ay saraakiil aan kaliya aheyn abbaanduulayaal dagaal balse ahaa halbowlaha halganka ay JWXO Ogaadeeniya ka wadda lagu waayey dalka Kenya iyo Koonfurta Soomaaliya dhawrki sano ee la soo dhaafay. Aynu tusaale u soo qaadanna Abbaanduulihi Abaabulka iyo Arrimaha Gudaha ee jabhadda, marxuum Cabdiraxmaan Cabdullaahi Muxumad Sayid, oo isla Nairobi lagu qaarajiyay 19/06/2011, asagoo socdaal-howleed ku joogay sida la sheegay. Warbaahinta jabhadda taageerta ayaa dilka Cabdi Cabdullaahi ku tuhuntay Cabdirashiid Maxamed Xiddig oo ah siyaasi can ah oo Soomaaliyeed kana soo jeeda gobollada Jubbooyinka Soomaaliya. Labadan dhacdo ee Xiddig iyo Xaaji lagu tuhunsan yahay waxey sidoo kale qaadan karayaan jawaabihi ayna sare u soo sheegnay iyo kuwa oodwadaag la ahba. Waxeysa xaqiiqdu tahay in Xiddig iyo Xaaji yihiin labada siyaasi ee ugu muhiimsan xilligan wadar ahaan siyaasiyiinta Jubbooyinka Soomaaliya u matala waxaana tusaale u ah geesinimadi ay muujiyeen labadi xilli ee ay matalayeen gobollada Jubbooyinka sidanna waxey ku noqdeen labo halyeey siyaasadeed oo ay dadka Jubbooyinka ee ay matalaan ku faanaan kuna fuudaan sababtuna waa in ay kasoo dhalaaleen xilalki loo igmaday ee ahaa in ay shacabkooda xaqiisa ku difaacaan masraxa siyaasadda Soomaaliya. Tusaale ahaan Ugaas Cabdiqaadir Xaaji wuxuu dowladda Itoobiya ku eedeeyey in ay gobollada Jubbooyinka xasuuq-shacab ka wadda asagoo ay ciidamo Itoobiyaan ah Xamar ku ilaalinayeen xilligi Cabdullaahi Yuusuf. Xiddigna waxaa marag-madoonta ah in xaqa shacabka Jubbooyinka uu si geesinnimo iyo ningarmeednimo ku dhantahay uga difaacay dulmi-siyaasadeed ay dowladda Soomaaliya madaxdeed qaar ka mid ah la maaganaayeen dadka ku dhaqan Jubbooyinka horraanki sanadki tagay. Laakiin maanta labadan siyaasiba waxaa lagu tuhunsan in ay iibsadeen saraakiil ONLF ah oo ay dhiig iyo dhalasho wadaagaan in kastoon caddeyn lagu heynin ee tuhun uun ay arrintu tahay. Qaanuunkuna wuxuu yiraahdaa, ‘Qofna dambiilo ma ahan ilaa ay maxkamad caaddil ah dambiga lagu tuhunsan yahay baaritaan ka dib kaga caddeyneysa.’ Sidaas darted Xiddig iyo Xaaji waa tuhmanayaal ee ma ahan dambiilayaal ilaa falkan looga helaya caddeyn dhab ah oon caaddifad kooxeed ku dhisneyn.
Haddii aan fikirkeyga qof ahaaneed arrintan ka dhiibta, wax badan kagama duwani fikradaha aynu sare ku soo akhrinnay balse hal xagal ayaan rabaa inaan iftiimiya oo ah: in siyaasaddu aysan laheyn saaxiib joogta ah balse ay leedahay maslaxad joogta ah sidaas darteedna wax kasta uu macquul yahay. Mar haddey sidaas tahay, sow suurtagal ma aha in sirdoonka Itoobiya uu saacad saacad ula socda dhaqdhaqaaqa saraakiisha jabhadda iyo cidda ay la gulmayaan? Sow macquul ma aha in Itoobiya ay dooneysa in siyaasiyiinta Jubbooyinka iyo saraakiisha jabhadda oo dhiig, dhaqan iyo dhalasho-wadaag ah ay kala goysa? Sow wax maangal ah ma aha in labada falba lagu beegay gool-siyaasadeed oo kala irdheysiin ah si tuhun iyo is-naceyb ay Itoobiya awrkeeda siyaasadeed ku kacsaneysa ay u gaadha? Sow macquul ma aha in saraakiisha jabhaddu ay yihiin kuwa dagan oo kala garan waayey Nogob iyo Nairobi? Sow suurtagal ma aha in hoggaanka sare ee jabhadda ay ka gaabiyeen fanka feejignaanta saraakiishooda? Sow la gareysan kari mayo in 30 sano ka dib aynan JWXO guul muuqata keenin? Sow haddana gar iyo dawba ma aha in JWXO halganka ay wata uu yahay mid rag-ka-rooni ah xilli ay bulshada Soomaaliyeed taageero iyo hiil walaanimo midna ku haysanin cunaqabateyna ay saran tahay dagaalna kula jirta dowlad guun ah oo heysata ciidamo carbis iyo cududba kaga sarreeya dagaalyahannada jabhadda? Sow gar iyo dawba ma aha in halgan aan dhiig badan loo daadinin uusan guuleysaneynin jabhadduna ay tubtaasi ku taagan tahay? Sow macquul ma aha in Dowlad Deegaanka iyo Jabhaddaba ay dagaalka ku baabi’inayaan dhallinyaro walaalo ah oo ay geeridooda Itoobiya isku si ugu wada farxeysa? Sow gar iyo daw ma aha in Cabdi Maxamuud Cumar uu gobolka hormariyey yahayna hoggaamiye horusocod ah? Sow haddana gar ma ahan in kummanaan aqoonyahanno iyo indheergarad ah ay ku bahdilan yihiin jeel Ogaadeen saas darteedna uu Cabdi ku yahay gacanyaraha gumeysiga? So maangal ma aha in dagaalka uu ku kali yahay Ogaadeen Soomaalidi kale ee dalka la laheydna aan waxba laga weydiinin? Sow haddana maangal ma ahan in kuwani ay addoonsiga Itoobiya sida kaniinka u laqeen jabhadduna ay karaamadooda iyo tan Soomliyeed si ka-wakiilmo-ah u difaaceysa?
Inta badan jabhadaha waxaa marxaladaha ay maraan loo qeybiyaa saddex caqdi-sanadeed waxaana la yiraahdaa 10-ka sano ee hore jabhaddi fikirkeeda ayey faafisaa, 10-ka sano ee xigana waxey ku howlgashaa ku dhufo oo ka dhaqaaq iyo 10-ka ugu dambeeyana waxey ku dagaallantaa magaalooyinka waaweyn ee dalka. 30-kaas sanadood haddii ay jabhaddu labada heer ee hore ka gudbi weyda, waxaa lagu macneeyaa jabhad fadhiid ah. Haddabo JWXO sow fadhiid weeyo la oran kari maayo? Jawaabtu waa haa iyo mayo isku dhafan. Haddaan haa niraahno, 30 sano ayaa laga joogaa aasaaski jabhadda wax magaalo ah oo ay maanta gacan ku haysana ma jirta saas darted waa fadhiid ayaa lagu doodi karaa. Haddii aynu maya dhahnana, waxaan ku doodi karnaa ONLF halganka ay ku jirta ebar kama aysan billaabine meynaas ayey ka billowday duul ay dowlado wareeriyeenna iney xoreysa ayey beylka u illatay saas darteedna guulo muhim ah ayey soo hoyisay. Haddabo, waxaan dooddeyda u hambeysanayaa riddacelinta magaalka uu burqin doona oon si weyn anna ugu tooghaya. Balse weydiinta warcelinta u baahan waxaa weeyo Xiddig, Xaaji iyo Xamxamta Shirqoolka ma waktigaa xordi doona?
Abwaan Maxamed Cabdiqaadir (Stanza)
Waa Qoraa Arrimaha Siyaasadda iyo kuwa Bulshada ka Faallooda haystana Posgraduate Degree in Diplomatic Peace and Development.
Buugaagta uu qorayna waxaa ka mid ah: Single Kiss, Haldoor, The Beaming Blood, Mettle of the Mind, Plight and Progress Iyo kuwa kale.